Orinasa vita am-patana afo - Mpanamboatra lamba tsy misy afo any Sina, mpamatsy
Ny lamba vita amin'ny kofehy vita amin'ny seramika dia vita amin'ny vovobony vita amin'ny seramika ary ampahany amin'ny fibre organika, nopetahany kofehy fitaratra (tariby vy), nopetahany kofehy, ary avy eo notenomina ho lamba.
Fampiasana lehibe lamba lambam-baravarana setroka:
a. Fanamafisana elektrika: ny lambam-pandehan'ny setroka setroka dia misy ambaratongam-pandrefesana elektrika avo lenta, mahazaka ny enta-mavesatra avo lenta, ary azo atao lamba misisika, tanany ary vokatra hafa.
b. mpamatsy vola tsy metaly: ny lamba vita amin'ny silika dia azo ampiasaina ho fitaovana fampifanarahana miovaova ho an'ny fantsona. Izy io dia afaka mamaha ny fahasimbana ateraky ny fanitarana hafanana sy ny fihenan'ny hatsiaka, ary ny lamba silika dia misy fanoherana ny hafanana avo lenta, fanoherana ny harafesina, fahombiazan'ny fahanterana, fahalemena ary malefaka. Azo ampiasaina betsaka amin'ny solika, indostrian'ny simika, simenitra, loharano angovo ary sehatra hafa.
Ny tarpaulin tsy mandeha amin'ny afo dia vita amin'ny lamba mahazaka hafanana avo lenta, manohitra harafesina ary hery matanjaka, izay ampifanarahana na ampiakarina amin'ny silipo vita amin'ny silika. Izy io dia vokatra mitambatra vaovao misy haavo avo lenta sy tanjona maro.
Lamba tsy misy kitapom-batsy sy Tape Silicone
Ny lamba tsy may mirehitra dia vita amin'ny vatan'ny afo sy tsy mora may, izay nohamarinin'ny dingana manokana. Lafiny lehibe: tsy mora may, mahazaka hafanana avo (550-1100 degre), rafitra matevina, tsy misy fahasosorana, firafitra malefaka sy henjana, mora fonosina zavatra sy fitaovana tsy mitovy. Ny lamba tsy may mirehitra dia afaka miaro ireo zavatra tsy misy toerana mafana sy faritra manaitra, ary misoroka na manasaraka tanteraka ny fandorana.
Ny lamba tsy may mirehitra dia mety amin'ny fametahana ary amin'ny fotoana hafa misy alikaola ary mora hiteraka afo. Izy io dia afaka manohitra ny taratra, ny slag, ny spatter welding, sns. Izy io dia afaka mitoka-monina ny toeram-piasana, manasaraka ny sosona miasa ary manafoana ny loza ateraky ny afo mety hateraky ny asa welding. Azo ampiasaina amin'ny insulateur maivana koa izy io, ary hametraka toerana azo antoka sy madio ary manara-penitra.